Boqorka urdun oo ku baaqay dagaal ka dhan ah cidii ku xadgudubta Masjidka barakeesan ee Al Aqsa.. - iftineducation.com
Boqorka urdun oo ku baaqay dagaal ka dhan ah cidii ku xadgudubta Masjidka barakeesan ee Al Aqsa..
aadan21 / August 17, 2016
iftineducation.com – Hogaamiyaha dalka Jordan Boqor Abdullah ayaa Isniintii sheegay in uu aad u canbaareenayo weerar kasta oo yahuuda Israel ku qaada Masaajidka al-Aqsa ee dhulka la haysta ee falastiin .
Wareysi uu siiyay Idaacadda Jordan Ad-Dustour, ayuu Boqorka balanqaaday inuu la dagaalamayo xadgudubyada soo noqnoqda iyo weerarada ay fuliyaan yahuuda iyo kooxaha xagjirka ah” ee masaajidka barakeesan.
“Waxaan si joogto ah isku dayeena in aanan wax ka qabano… isdabamarin walba oo lagu beddelayo xeerka Jerusalem, ee goobaha dhaxal ahaan iyo aqoonsiga taariikhiga ah ayuu boqor abdalla ku dhawaaqay .
Jordan waa masuulka xarunta masaajidka Al-Aqsa ee dhulka xooga lagu haysto ee bariga jurusalam iyagoo ku celceliyay cambaareeyeyna marar badan waxa uu ugu yeeray xadgudubyada xeerarka goobta barakeesane saddexaad ee Islamka .
Yuhuudda, kuwaas oo aaminsan xarunta meel iyaga u gaar ah oo barakeesan uguna waca Buurta Macbadka,( Temple Mount,) ayaa loo ogolyahay in ay soo booqdaan kaliya laakiin inaysan ku tukan si looga fogaado xiisad u dhaxeesa Muslimiinta oo halkaasi ku cibaadeesta
Ruushka oo bilaabay inuu adeegsado Garoomada diyaarada ee dalka IRAN